I-BangEa – Ukulanda isofthiwe yokuhweba ngohlelo
Izilungiselelo Zomhlaba Wonke
Setha kabusha Iphaneli
Inzuzo & Ukulahlekelwa
Imakethe Enesikhathi & I-oda lokulinda
I-Market & Pend Order
Iphaneli yokuvala Imisebenzi esekelayo
ENGEZA Iphaneli ye-oda
Okuhle Engeza Isikhala
Okuhle Ngeza Okuningi x
Okuhle Ngeza Umkhawulo
Hlehlisa Faka Isikhala
Hlehlisa Faka iLoti x
Hlehlisa Engeza Umkhawulo
Shintshanisa amasheya SW
Vula futhi Vala Ngokuzenzakalelayo
Hedg Olunye Uphawu
Ikhasi lasekhaya lenkundla
Isoftware ye-EA yendawo yonke imahhala ukuyisebenzisa
I-EA isifinyezo sohlelo lokuhweba oluzenzakalelayo lomeluleki ohlakaniphile.
Isofthiwe yokuhweba ngohlelo.
Mashi 15, 2022
Thola ukuhweba okuzenzakalelayo ngokugcwele kwe-K-line angle
Lona umbuzo ophakanyiswe umngane kuforamu ye-EA BANG. Eqinisweni, lo msebenzi awudingi ukwenziwa inkomba, ngoba i-EA ekhona ingayibona. Kunezindlela ezimbili zokufeza lokhu. Uyini ukuthambekela komugqa we-k? Kungumugqa owenziwe ngokuxhuma i-N […]
Umehluko phakathi kokuhweba okuhleliwe kwe-EA kanye neskripthi
I-EA: Njalo lapho intengo ishintshashintsha, ikhodi ku-EA ibulawa kanye; Iskripthi: Ngemva kokuqaliswa kombhalo, ikhodi isetshenziswa kanye kuphela. Ukuze siqonde umehluko ngendlela efanele, uMnu. Tang we-EA Bang wabhala ngokukhethekile i-EA kanye neskripthi sokubonisa, umsebenzi wayo ukukhipha isikhathi. […]
Thola ikheli le-IP leseva yokuhweba
Lokhu kuyimfuneko ephakanyiswe umngane kuforamu ye-EA State ngaphambili. Ubesebenzisa i-EA yethu yohlelo ukuze ahwebe njalo, futhi isu lokuhweba liwuhlobo lokuxubha i-oda. Sonke siyazi ukuthi isivinini sokuthenga sinethonya elikhulu kuqhinga lemisebenzi evamile. Uvame ukusebenzisa i-VPS […]
Nge-EA eyodwa elawula ama-oda wenye i-EA, ungakwenza lokhu.
Enqubweni yokusebenzisa ukuhweba okuhleliwe, ingabe uke wahlangabezana nesimo esinjalo? Isikhundla sokuvula se-aEA singcono, futhi isikhundla sokuvala se-BEA singcono. Kungaba kuhle uma la ma-EA amabili angahlanganiswa ndawonye! Ngokuvamile, sisebenzisa i-1 EA ukuvula nokuvala izikhundla. Uma ngifuna ukuphatha […]
Mayelana nefayela lokumisa ipharamitha lokuhweba okuhleliwe, kwanele ukufunda lesi sihloko
Isetshenziswa kanjani ifayela lokucushwa le-EA? Umsebenzisi ubesebenzisa i-Bang EA's Hedging EA ekuhwebeni okuhlukahlukene. Imisebenzi ye-software ye-EA ihlale inothiswa. Njengoba isikhathi sihamba, kunamakhulu emisebenzi ye-EA, ngakho vele usebenzise izimo zephaneli ezenzakalelayo ukuze uvule futhi uvale izikhundla. Ngokwesibonelo, kukhona abaningi […]
Ingabe ama-oda wokuhlehlisa amasu okulahlekelwa athembekile?
Phakathi neminyaka eyi-10 edlule yokuhweba okufanisiwe, isu lokuhweba eliqhubekayo lenze ukulahlekelwa okungaguquki, futhi kule nqubo, lasetshenziswa ngokuqinile ngokwesu elimisiwe lokuhweba. Emakethe yesikhathi esizayo, amathuba okulahlekelwa aphakeme kakhulu, futhi angase abe nokulahlekelwa. Uma silandela isu lokuhweba […]
Ukuhweba kwe-EA kulondoloza ngokuzenzakalelayo izithombe-skrini
Qaphela: Lesi sihloko sidluliswa sisuka ku-www.eabang.com. Lesi sihloko siyividiyo eqoshwe nguMnu. Tang. Kulabo abangathandi ukubuka amavidiyo, ungafunda isihloko. Ungazithatha kanjani izithombe-skrini ngokuzenzakalelayo lapho i-EA ivula futhi ivala ama-oda? Lo msebenzi uyisicelo esivela kwilungu le-EA. Ngokuvamile usebenzisa ukuthengiselana okuhleliwe. Unayo […]
Ungawuqonda kanjani umehluko phakathi kwebha yosuku ne-macrocycle?
Umehluko uvela ikakhulukazi ekubunjweni kwebha ezikhathini ezihlukene zokulungisa d. Njengoba kuboniswe esithombeni esingezansi, njengeshadi lomzuzu ongu-1 kanye neshadi lansuku zonke, olayini baka-K abaningi eshadini lomzuzu ongu-1 bangase babe nenani elincane kuphela lama-TICK. Phakathi nesikhathi esingasebenzi sezinhlobo ezithile ezingathandwayo, i-K-line yomzuzu owodwa iyashintshashintsha […]
Yini okufanele ngiyenze uma i-EA ingavali ama-oda
1.Chofoza okuthi “Thenga Vula” noma “Thengisa Vula” Kuphaneli Yokuvula ukuze uhlole ukuthi likhona yini i-oda eligcwalisiwe. Uma lingekho i-oda elisha, Sicela uhlole ukuthi i-mt4 ne-mt5 ingenisiwe yini, nokuthi “Algo Trading” kanye “Vumela ukungenisa kwe-DLL” kuvuliwe. Ukufakwa kwe-EA 2.Uma kune-oda elisha, ama-oda angavaliwe awaphathwa, Faka […]
Hlunga olunye uphawu
Lo msebenzi usetshenziselwa izimpawu eziningi. Ngemuva kokuthi i-Oall T/P kuphaneli yokuvala iqalisiwe, inani lenzuzo yalo libiyela ukulahlekelwa okuphethwe yile EA nge-oda elilodwa kakhulu, nokuthi kungakanani okungavalwa; Pofit>0:Inzuzo yama-oda amabili abiyelwe inkulu kuno-0; Ukulahlekelwa kwe-akhawunti kufanele>%:Ukulahlekelwa okuntantayo/Ibhalansi>5%.
ikhasi 1 ikhasi 2 ikhasi 3 ... ikhasi 19
Izihloko zakamuva zenkundla
I-Hedging EA v3.8.8.4 landa futhi ubuyekeze incazelo yomsebenzi
Imingcele yezimpawu eziningi, isisebenze izinyanga ezi-5, futhi inzuzo ingama-50
I-Hedging EA v3.8.8.3 landa futhi ubuyekeze incazelo yomsebenzi
Sekukonke ukulungiselelwa kwe-S/P kwephaneli yokuvala
Ukuhlola imuva kuhamba kancane kakhulu.
© 2022 BangEa. Yakhelwe kusetshenziswa i-WordPress kanye Itimu ye-ColibriWP .